IHuawei P Smart 2019: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, imigaqo yefowuni entsha yeHuawei yaqala ukuvuza. Sibhekisa kwi-Huawei P Smart 2019, yantnoni Iinkcukacha bezisiza kuthi njengokuba iiveki zihamba. Okokugqibela, inqanaba elitsha eliphakathi kwinqanaba lomenzi waseTshayina sele linikezelwe ngokusemthethweni. Ke siyazazi iinkcukacha zayo.
Le Huawei P Smart 2019 iboniswa njenge ifowuni ethathela ingqalelo iindlela zentengiso. Ifikelela kwi-premium mid-range, icandelo elikhulayo eliboniswa njenge enye indlela elungileyo ukuya esiphelweni esiphezulu, ukongeza ekunikezeleni uyilo lwangoku kunye nenotshi yalo ekubunjweni kwethontsi lamanzi.
Kwinqanaba lobuchwephesha, imodeli ehlangabezana ngokugqibeleleyo noko sinokulindela kuluhlu lwayo namhlanje. Iimpawu ezilungileyo, eya kuthi ngokuqinisekileyo yoyise abasebenzisi. Ukongeza, njengesiqhelo kuhlobo lophawu, sinokulindela ixabiso elifanelekileyo lokuthengisa.
1 Ukucaciswa kweHuawei P Smart 2019
Ukucaciswa kweHuawei P Smart 2019
IHuawei P Smart 2019 ifika neKirin 710 njengeprosesa yayo. Ayothusi, kuba yiprosesa eyenziwe ngulo mngcelele waseTshayina weli candelo le-premium mid-range. Ke ukusebenza kakuhle kwefowuni kulindeleke malunga noku. Ukucaciswa kwezixhobo ezipheleleyo zezi zilandelayo:
Isikrini: 6,21 intshi ene-HD epheleleyo + isisombululo kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: I-Kirin 710 octa-core evaliweyo ukuya kuthi ga kwi-2.2 GHz
I-RAM: 3 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-64 BG (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB)
Ikhamera esemva: I-13 + 2 MP ngokuvula f / 1.8
Ikhamera yangaphambili: MP engama-8 ene-f / 2.0 ukuvula
Ukuxhuma: I-4G / LTE, iBluetooth, i-WiFi 802.11a / b / g / n / ac, irediyo ye-FM, i-3.5 mm eyintloko yentloko, i-microUSB
Ibhetri: 3400 mah
Ubungakanani: I-155.2 x 73.4 x 8 mm.
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie ene-EMUI 9 njengomaleko wokwenza ngokwezifiso
Imibala: Phakathi kobusuku obuMnyama kunye ne-Aurora Blue (Twilight)
I-Huawei khange ithathe umngcipheko omninzi ngale modeli. Uphawu lwaseTshayina luthathele ingqalelo into esezintengweni namhlanje kwaye lukwazile ukwenza imodeli ehlangabezanayo nenokubhenela abathengi. IHuawei P Smart 2019 ijoyina imowudi yenotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Enye yeendlela zentengiso kwiinyanga ezidlulileyo, ezibonakala zisebenza kakuhle phakathi kwabathengi kwi-Android.
Ngokweenkcukacha ezithile, ngaphezulu kokuhlangabezana noko sikufumanayo kweli candelo lentengiso namhlanje. Isikrini esikhulu, nesisombululo esihle. Iprosesa eya kuthi inike intsebenzo elungileyo kunye ikhamera emibini, kunye nobukho bobukrelekrele bokufakelwa ukunika abasebenzisi iindlela ezininzi zokufota.
Ibhetri yefowuni yi-3.400 mAh. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokutshaja ngokukhawuleza kwifowuni, ke oko akubonakali ngathi uya kuba nakho ukufikelela kuyo. Ukudityaniswa neprosesa, kuya kufuneka inike abasebenzisi ukuzimela ngokwaneleyo. Ukongeza, le Huawei P Smart 2019 ifika ne-Android Pie ngokwendalo. Iindaba ezimnandi zabasebenzisi, ukongeza ekubeni nakho ukunika amandla kule nguqulo yenkqubo yokusebenza kwintengiso.
Ifowuni sele ityhilwe ngokusemthethweni e-China. Nangona, ngokungafaniyo nezinye iintetho zolu hlobo, ngoku sinedatha ngomhla wokuqaliswa kwayo eYurophu. Ukusukela ukuba uphawu lwaseTshayina luzakuyivula ifowuni kuzo zonke iimarike apho bakhoyo ngoku. Kwaye akuyi kufuneka silinde ixesha elide.
IHuawei P Smart 2019 izakwaziswa ngoJanuwari 15. Iya kuza ngemibala emibini, njengoko besesitshilo, eyi-Aurora Blue kunye neMidnight Black. Akubonakali ngathi kuyakubakho imibala ekhoyo ngalo mzuzu. Ikhutshwe ngokudityaniswa okukodwa kwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi.
I-Huawei P Smart 2019 iya kubetha ezivenkileni ngexabiso lama-euro angama-249. Ke ithiwe thaca njengenye indlela ngexabiso elifanelekileyo leli candelo. Ucinga ntoni ngale modeli?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P Smart 2019: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi
IGreen Note 9 iya kufumana i-Android Pie phakathi kuJanuwari